सोधिने प्रश्न - Hongwugas ग्याँस गरमा प्रणाली
Hongwugas ™ फिटिंग
डिजाइन र स्थापना
CSST के हो?
नालीदार स्टेनलेस स्टील ट्यूबिंग (CSST), आवासीय व्यावसायिक र औद्योगिक संरचना मा प्राकृतिक ग्याँस र प्रोपेन आपूर्ति गर्न प्रयोग लचिलो, स्टेनलेस स्टील पाइप छ।
लचिलो ग्याँस पाइपिंग को लाभ के हुन्?
ठूलो स्थायित्व प्रदान बाहेक, CSST लचिलो, यो पर्खाल वरिपरि र प्रत्येक रन को अन्त्य मा आवश्यक फिटिंग संग अवरोध मार्फत snaked गर्न अनुमति छ। प्रत्येक अतिरिक्त संयुक्त आवश्यकता सज्जित रूपमा गर्न सकिन्छ र लिक लागि जाँच फिटिंग को संख्या कम लाभदायक छ। एक CSST ग्याँस पाइपिंग सिस्टम कम जोइन्टहरूमा, र यसैले कम क्षमता लिक बाटो छ ।
CSST मेरो घर मा प्रयोग गर्न सुरक्षित छ?
ठीक स्थापना गर्दा सबै स्वीकृत ग्याँस पाइपिंग प्रणाली जस्तै CSST सुरक्षित छ। CSST उत्पादकको डिजाइन र स्थापना (डी र म) गाइड, सम्बन्ध गाँसिसकेको र सिस्टम को ग्राउंडिंग सहित एक योग्य व्यावसायिक र अनुसार द्वारा स्थापित हुनुपर्छ।
सम्बन्ध गाँसिसकेको र ग्राउंडिंग के हो?
सम्बन्ध गाँसिसकेको: विद्युत निरन्तरता र चालकता स्थापना धातु प्रणाली जडान गर्न।
ग्राउंडिंग: भुइँमा वा जडान जमीन गर्न को विस्तार एक प्रवाहकीय शरीर जडान।
राष्ट्रिय संघ राज्य आगो Marshals को (Nasfm) शुरूआत राष्ट्रव्यापी पहेंलो Csst सुरक्षा अभियान NASFM6लाख भन्दा बढी मा सुरक्षा सुधार गर्न शिक्षा प्रयासको प्रेरणादायक एक संकल्प क्षणिक लागि अमेरिकी सीनेट Applauds ...
© HONGWUGAS प्रतिलिपि अधिकार - 2010-2017: सबै अधिकार सुरक्षित। - द्वारा पावर Globalso.com